Ahoana ny fomba fifindrana amin'ny sary mankany amin'ny lahatsoratra misy safidy isan-karazany | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fandehanana amin'ny sary mankany amin'ny lahatsoratra
Alao an-tsaina izao toe-javatra manaraka izao: vao nahavita sary iray izay nanehoanao ny asa hatoloranao ho an'ny mpanjifanao amin'ny maraina. Tonga lafatra izy io ary mirehareha amin'ny zavatra nataonao. Tehirizinao amin'ny endriny rehetra ny zava-drehetra ary hamafa ny fisie rehetra nataonao. Ary rehefa manamarina indray ianao aorian'ny ora vitsivitsy ... Mampihoron-koditra! Manana tsipelina diso diso ianao. Ary inona no ataonao izao? Ataonao indray ve izany rehetra izany? Io dia mety ho mandefa sary handefasa hafatra handefasana azy io?
Soa ihany ho anao, eny, ny marina dia afaka manana ny vahaolana amin'ny olanao ianao raha fantatrao fa azo avadika ho soratra ny sary iray, fa ahoana no anaovana izany? Misy programa ho an'ny karazana sary rehetra? Mila manao izany amin'ny tanana ve ianao sa afaka mampiasa programa mandeha ho azy? Ireo fisalasalana rehetra ireo no hamahanay anao eto ambany.
1 Ahoana ny fomba hanovana sary ho lasa lahatsoratra amin'ny Google Drive
2 Avadiho ho lasa lahatsoratra miaraka amin'ny OneNote ny sary
3 Azonao atao ve ny mamadika sary ho lahatsoratra misy rindranasa?
3.2 Lens Office Microsoft
3.3 Scanner PDF
4 Sary handefasana hafatra an-tserasera
Ahoana ny fomba hanovana sary ho lasa lahatsoratra amin'ny Google Drive
Ny vahaolana voalohany omenay anao dia mandalo zavatra izay ampiasainay tsy tapaka: Google. Raha ny tena manokana dia mila Google Drive hahafahana miasa isika, satria io fitaovana io no hiandraikitra ny famadihana ilay rakitra sary ho lahatsoratra. Fa ahoana no anaovanao azy?
Raha vantany vao misokatra ny Google Drive amin'ny solosainao, dia mila mampakatra ilay sary tianao hivadika ho Drive ianao. Manaraka, amin'ny bokotra ankavanana dia mila tsindrio Open / Google Documents.
Inona no hataony? Inona ary Hanova ho azy ny sary ho lasa lahatsoratra i Google, tena amin'ny antontan-taratasy Google. Mazava ho azy fa tsy maintsy miomana ianao satria indraindray tsy mivoaka mitovy amin'ny sary. Midika izany fa ho very endrika sasantsasany ianao, indrindra ireo lisitra, tsanganana, fanovozan-kevitra eny amin'ny pejy na amin'ny faran'ny pejy, latabatra sns Tsy azo "voatahiry" daholo izany rehetra izany fa ny haben'ny endri-tsoratra, ny karazany, ny sahisahy, ny sora-mandry ary ny tapaka aza ny tsipika dia hitazona azy ireo
Midika izany fa, na dia hampiova azy ianao, dia tsy maintsy manokana fotoana kely amin'ilay antontan-taratasy ianao mba hahafahana mamerina azy io toy ny taloha, na hampiasa azy io hamerina ny zavatra nataonao tamin'ny programa fanovana sary.
Avadiho ho lasa lahatsoratra miaraka amin'ny OneNote ny sary
Safidy iray hafa azonao andramana, indrindra raha ny hany zavatra mahaliana anao momba ny sary dia ilay lahatsoratra izay ananany ao aminy, dia amin'ny alàlan'ny OneNote. Miresaka momba ny Microsoft OneNote izahay ary, mino na tsia, dia mifaninana amin'ny Google Drive. Ankehitriny, inona no tokony hatao?
Voalohany indrindra, mila izany ianao sokafy OneNote raha te hiditra Insert ary mampakatra ireo sary tianao hivadika ho lahatsoratra. Raha vantany vao azonao ireo dia tsy maintsy manondro ny sary ianao ary tsindrio ny bokotra totozy havanana. Zahao ny safidinao avy amin'ny sary.
Ankehitriny, saika mandeha ho azy dia hanana ny soratra eo amin'ny solaitrabe ianao ary ny sisa ataonao dia apetaho ao anaty takelaka na Teny, izay ahazoanao aina kokoa.
Araka ny efa hitanao, ity safidy ity dia tsy hahazo ny lahatsoratra fotsiny, fa tsy misy zavatra hafa. Ary koa, miankina amin'ny toerana hametahanao azy, dia mety hiafara amin'ny famoahana ny endriny ianao.
Azonao atao ve ny mamadika sary ho lahatsoratra misy rindranasa?
Raha iray amin'ireo mampiasa tsy tapaka ny findainao na ny takelakao ianao ary mitady vahaolana amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia tokony ho fantatrao fa eny, amin'ny alàlan'ny fampiharana dia azonao atao ny mahita vahaolana vitsivitsy amin'ny olanao amin'ny famadihana sary ho lahatsoratra.
Raha ny marina dia misy maromaro, na dia ireto aza no atolotray ireto:
Avy amin'ny orinasa Google indray, hamela anao izy io asehoy ny sary, hosodoko ny soratra mba hadika avy eo, ary apetaho ao anaty rakitra izay tianao. Tsotra toy izany!
Ny zavatra tsara indrindra momba ny Google Lens dia ny fahaizany mandika lahatsoratra, izay manome anao lalao bebe kokoa hampiasana azy na dia sary miaraka amina lahatsoratra avy amin'ny fiteny hafa aza. Mazava ho azy, mitandrema amin'ny fandikana satria diso izy ireo indraindray.
Lens Office Microsoft
Ity rindranasa ity dia mandeha lavitra kokoa noho ny an'ny Google teo aloha. Ary, amin'ity tranga ity, rehefa asehontsika azy ny sary dia mandeha ho azy izany raketo an-tsoratra hoe inona avy ireo ampahany amin'ny lahatsoratra ary handika azy rehetra mamorona rakitra Word (na koa avy amin'ny OneNote na PDF) mba hanananao ny fanovana ny sary ho lahatsoratra.
Alao an-tsaina hoe naka sary iray misy taratasy misy soratra lava dia lava ianao izao dia mila an'io lahatsoratra io ary tsy te handika azy. Aza matahotra fa tsy mila izany ianao. Ny hany zavatra ilainao dia ity rindranasa ity.
Manao inona ianao? Raha vao jerenao ny sary, hamadika ny sary ho lasa antontan-taratasy. Izy io aza dia afaka manampy sonia nomerika amin'ny antontan-taratasy vokariny. Mazava ho azy, jereo aorian'ny fiovam-po satria mety tsy hahatratra litera vitsivitsy izy indraindray.
Sary handefasana hafatra an-tserasera
Ny safidy farany omenay anao handefasana sary amin'ny lahatsoratra dia amin'ny alàlan'ny Internet. Ary misy pejy web maro azonao atao mampakatra ny sary ary ireo fitaovana ao aminy dia tompon'andraikitra amin'ny famakiana azy sy amin'ny fandikana ny lahatsoratra rehetra amina antontan-taratasy (mazàna Word na PDF) mba hahafahanao misintona azy ary miasa amin'izany.
Mazava ho azy, araka ny lazainay foana aminao, ity safidy ity dia tsy natao ho an'ny rehetra. Ary izany ve raha toa ka manan-danja tokoa ilay antontan-taratasy ary mila mitazona ny fanaraha-maso azy ianao ary maka antoka fa tsy azon'ny olona tsy nahazoana alalana ny fampahalalana ao anatiny, tsy izany no tsara indrindra ampidirina amin'ny Internet. Na dia manana politika fiarovana mafy aza ny ankamaroan'ny tranokala, miankina amin'ny tranga inona, tsy azo atao izany (ohatra amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa tsy miankina).
Fa raha tsy misy olana amin'ity iray ity, ny sasany amin'ireo pejy azontsika atolotra dia:
Ny fiasan'ireo pejy rehetra ireo dia tena mitovy. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ampidirinao amin'ny mpizara azy ireo ny sary mba hiasa ilay fitaovana ary afaka segondra na minitra dia manome anao rakitra rakitra (TXT, Word, ODT na PDF) hahafahanao misintona azy. Raha mila manova ireo antontan-taratasy ireo amin'ny endrika hafa amin'ny ankamaroan'ny pejy ianao dia ho afaka mahita fomba hanaovana azy koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fandehanana amin'ny sary mankany amin'ny lahatsoratra